रेफरलहरू - Flag DV
-० मिनेट निःशुल्क अपोइन्टमेन्ट पहुँच गर्दै
हामी सराहना गर्छौं कि कानुनी सल्लाहकारसँग कुरा गर्न तपाईं चिन्तित वा व्याकुल हुन सक्नुहुन्छ, विशेष गरी यदि यो तपाईंले पहिलो पटक गर्नुभयो भने।
हाम्रो टीम तपाईंलाई सहज महसुस गराउन प्रतिबद्ध छ र तपाईंले हामीलाई भन्नु पर्ने कुरामा ध्यान दिनेछ।
कृपया तलका चरणहरू पढ्नुहोस् जुन तपाईं फ्ल्याग डीभीसँग अपोइन्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र के अपेक्षा गर्ने।
चरण १ को योग्य हुन्छ?
१ 18 बर्ष भन्दा माथिको कुनै पनि व्यक्ति जो अहिले आर्थिक स्थिति, लि ,्ग, जातीयता, यौन झुकाव वा जातिलाई ध्यान नदिई घरेलू हिंसा वा हिंसाको अनुभव गर्दै छ।
हामी पश्चिम बर्कशायरको काउन्टीमा बसोबास गर्ने ग्राहकहरूको साथसाथै अक्सफोर्डशायर, बकिhaहमशायर, र व्यापक बर्कशायर क्षेत्रको छेउछाउका काउन्टीहरूमा हाम्रो सेवा प्रस्ताव गर्दछौं।
चरण २ यो कसरी काम गर्दछ?
फ्ल्याग डीभीले एक रेफरल फाराम प्राप्त गर्दछ तपाईको परिवार कानून सल्लाहमा पहुँच गर्न आवश्यकताको लागि अनुरोध गर्दै। यो रेफरल फारम तपाइँ वा तेस्रो पक्ष पेशेवर द्वारा बनाउन सकिन्छ। कृपया चरण3हेर्नुहोस्, रेफरल बनाउँदै , जसले तपाईंलाई यो कसरी गर्ने भनेर बताउँछ। हामी यो रेफरल प्राप्त भइरहेको प्रतिक्रियामा एक भेट प्रस्ताव।
तपाइँको अनुहार भेट्ने भेट वा टेलिफोन परामर्श एक स्वयम्सेवा कानूनी सल्लाहकार संग हुनेछ जो एक योग्य वकिल, कानूनी कार्यकारी वा बैरिस्टर हुनेछ। तिनीहरूसँग पारिवारिक कानूनको ज्ञान र अनुभव हुनेछ घरेलु हिंसा वा दुरुपयोग सहित। स्वयंसेवकले तपाईको स्थितिको ’boutमा सल्लाह दिन्छ। हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं कि तपाईले भेट्नु भएको कुरा वा कागजातको कागजको प्रतिलिपि तपाईले लैजानुहुन्छ जुन तपाईको छलफलसँग सान्दर्भिक हुन सक्छ। यी सामाजिक सेवाहरू, जीपी, अदालतहरू, पुलिस, आवासबाट हुनसक्दछ र भेटघाटको नतीजामा सहयोगी हुन सक्छ। तपाईंलाई नोट लिनका लागि स्वागत छ र हामी तपाईंलाई जानकारी पत्रक वा साइनपोष्ट अन्य संगठनहरूलाई दिन सक्दछौं जसले तपाईंलाई थप सहयोग गर्न सक्दछन्। तपाईको क्लिनिक अपोइन्टमेन्ट पछि तपाईलाई अर्को चरणहरुमा स्पष्ट सल्लाह दिइनेछ।
यदि तपाईंलाई थप वकील पहुँच गर्न आवश्यक छ भने यो फ्ल्याग डीभी द्वारा प्रदान गरिने छैन तर स्वतन्त्र रूपमा आफैंले स्रोत द्वारा लिनेछ। हामी प्रत्येक ग्राहकको लागि एक क्लिनिक अपोइन्टमेन्ट प्रस्ताव गर्दछौं। कृपया सचेत रहनुहोस् कि हामी केवल तपाईलाई सल्लाह दिइरहेका छौं कुनै अन्य पार्टीलाई। फ्ल्याग डीभी कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईंको लागि प्रतिनिधित्व प्रदान गर्न असमर्थ छ।
चरणaरेफरल बनाउने
समर्थनका लागि हाम्रो अनलाइन फाराम पूरा गर्नुहोस्; यस पृष्ठको शीर्षमा अवस्थित बटन ‘रेफरल फाराम’ क्लिक गर्नुहोस् र कृपया हामीलाई तपाईंको आवश्यकताहरू राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्न सकेसम्म फारम पूर्ण गर्नुहोस्।
वा तपाईं 0800 1 73१ ०555555 सोमबार देखि शुक्रवार बिहान १०:०० बजेदेखि 7:०० बिहान कल गरेर टेलिफोन जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। एक घरेलु दुरुपयोग र हिंसा मा विशेषज्ञ एक कल ह्यान्डलर तपाइँलाई हाम्रो अनलाइन फारम को रूप मा उही जानकारी को लागी सोध्नुहोस् र तपाइँको लागि सुरक्षित हामीलाई रेफरल बनाउन।
* महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी। यस प्रक्रियाभरि ग्राहकहरूको सुरक्षा हाम्रो लागि सर्वमहत्त्वपूर्ण कुरा हो।
हामी तपाईंलाई ईमेल वा टेलिफोनबाट अपोइन्टमेन्ट गर्न सम्पर्क गर्नेछौं, तपाईंले चाहानु भएको जुनसुकै विधिलाई तपाईंले प्राथमिकताका रूपमा पहिचान गर्नुभयो र कम से कम तपाईंको सुरक्षामा सम्झौता गर्नेछौं।
कृपया हामीलाई भन्नुहोस् कि यदि ती दुवै सुरक्षित छैनन् र हामी भेट्न सकिने तेस्रो पार्टीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ भेटघाटको व्यवस्था गर्न।